သင်ဒီမှာပါ: Home / recycling Solutions / ဘက်ထရီ / ဘက်ထရီပြန်သုံး! အဘယ်သူမျှမလိုအပ်သောအရည်ပျော်
15 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ PilonaComment ချန်ထား
Sétifအတွက် 1950 အတွက်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Farouk Tedjar အဆိုပါ Institut အမျိုးသား Polytechnique က de Grenoble ကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာ 1993 အတွက် startup Recupyl ဖန်တီးပေးပါတယ်။ 2012 ခုနှစ်တွင်သူသည်ဥရောပတီထွင်သူဆုကို၏နောက်ဆုံးအဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ၎င်း၏မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် lithium-ion ဘက်ထရီပစ္စည်းများ 98% ပြန်လည်သက်သာ။
သငျသညျအထူးသဆဲလ်ဖုန်းဘက်ထရီပြန်သုံးအာရုံစိုက်လျက်ရှိသောပိုက်ကွန်အပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဤမျှလောက်များစွာသောစနစ်များမရှိပါ။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်အများစုလျှင်အားလုံးမဟုတ်တဦးတည်းနိယာမအပေါ်အခြေခံထားတယ်: ဘက်ထရီဟာ recuperation ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ဆင်းအရည်ပျော်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်ထံမှ Farouk Tedjar နှင့် Jean-Claude Foudraz တီထွင်ဒီစနစ်, အားလုံးမှာဘက်ထရီကိုဆင်းအရည်ပျော်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါပြန်လည်ဖြစ်စဉ်ကိုသာမန်အပူချိန်မှာပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ, 19 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ 24 န်ထမ်းကမ္ဘာတဝှမ်း 50 အကြောင်းကိုပြင်သစ်နိုင်ငံရှိပါတယ်။ 2009 အတွက်အရောင်း 1 အတွက်န်းကျင် 2009 ယူရိုသန်း ရှိ. , ယနေ့ပြုလုပ်4သန်းပေါင်းများစွာယူရိုဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်မကြာခဏကအမှတ်တံဆိပ် "သစ်" သတင်းမဖြစ်ပေမယ့်ဒီဆဲလ်ဘက်ထရီပြန်လည်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်း Planet ကိုများအတွက်စိတ်ကူးဖြေရှင်းချက်ပါ! အဆိုပါချမှတ်ခြင်းနီးပါး 20 နှစ်, အဘယျသို့တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်း,
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဆဲလ်အရူးနဲ့တူရောင်းချနေကြသည်အဖြစ် ပို. ပို. ဘက်ထရီရှိလိမ့်မည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Planet ကိုကမ္ဘာမြေကောင်းမွန်သည်မသာဖြစ်သောကြောင့်ဒါပေမယ့်လည်းလုပ်ခံရဖို့ပိုက်ဆံလည်းမရှိသောကွောငျ့ recycling သွားဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်
ဆဲလ်ဘက်ထရီ၏အဘယ်သူမျှမအရည်ပျော် ... ဖြစ်နိုင်လျှင်
ဘက်ထရီ၏နှိမ့်ချခြင်းမရှိအရည်ပျော်နှင့်အတူ Process ကို
ကန့်သတ် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု
ဘက်ထရီပြန်သုံးဘို့နည်းလမ်း - Farouk Tedjar နှင့် Jean-Claude Foudraz (ပြင်သစ်)
ဥရောပတီထွင်သူဆုကို 2012 - Farouk Tedjar (ပြင်သစ်)
Compagny က်ဘ်ဆိုက်ကို - Recupyl
ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ရင်းမြစ်အပိုဒ် - Farouk Tedjar, obsédé de l'accu
ဘက်ထရီပြန်သုံးအကြောင်း Excellent ကအပိုဒ် - ဘက်ထရီပြန်သုံးဖို့ကိုဘယ်လို
Documentation – Planet ကို Fixer ရေရှည်တည်တံ့သောစာကြည့်တိုက်
Filed under: ဘက်ထရီ အတူ Tagged: ပြင်သစ်